सफल भिडियो मार्केटिंग: Semalt बाट शीर्ष5सुझावहरू
तपाईंले आफ्नो वेबसाइट वा सोशल मीडियामा भिडियो पोष्ट गर्दा तपाईं के प्राप्त गर्न सेट गर्नुहुन्छ? के तपाई यो भाइरल भएको चाहानुहुन्छ? ठिक छ, त्यो तपाइँको एकमात्र उद्देश्य हुनु हुँदैन। मार्केटरको रूपमा तपाईंले सुन्नुभयो वा आश्चर्यजनक तथ्या about्कहरूको बारेमा पढ्नुभयो होला: २०१ 2017 बर्ष जान्छ, भिडियो मार्केटिंग अभियानहरूले सबै उपभोक्ता ट्राफिकको लगभग %०% को लागी हिसाब गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, भिडियो विज्ञापनहरू अवतरण पृष्ठहरू भन्दा तपाईं5गुणा छिटो बढ्नुहुनेछ। ' म एउटा ठूलो ठूलो %००% रूपान्तरण दर प्राप्त गर्दछ। यो एक राम्रो पढ्न को लागी बनाउँछ, सही? त्यसोभए, तपाइँ कसरी आकर्षक भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ?
Semalt बाट ग्राहक सफलता प्रबन्धक अलेक्ज्याण्डर पेरेसुन्को , सफल भिडियो मार्केटिंगको अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
१. कथाको वरिपरि तपाईंको भिडियोहरू केन्द्रित गर्नुहोस्
त्यहाँ हजारौं कष्टप्रद भिडियोहरू छन् जुन अनलाइन भीडसँग राम्रोसँग बढ्दैन। त्यो मान्छे नहुनुहोस्। जोड्न मानमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, र स्वाभाविक रूपमा, तपाईं लिड्स पाउनुहुनेछ। ग्राहकको आवश्यकताको अधिकतम लाभ उठाउनुहोस् र सबै कुरा राम्ररी ठाउँमा हुन्छ। तपाईं जहिले पनि भिडियोको अन्त्यमा 'ट्र्याक' युआरएलको साथ एक रणनीतिक र सान्दर्भिक कल-टु-एक्शन राख्न सक्नुहुन्छ (केवल यकिन गर्नुहोस् कि यो तपाईंको कहानीसँग सम्बन्धित छ)।
२. यसलाई अहिलेको उत्तम दश सेकेन्ड बनाउनुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ धेरै व्यक्ति केवल १० सेकेन्ड वा कम पछि क्लिक गर्छन्? यसले के स ?्केत गर्छ? सरल: तपाइँको बिन्दु सुरू देखि नै प्राप्त गर्नुहोस्। जिज्ञासा स्पार्किंग कोशिस गर्नुहोस् प्रश्नहरू सोधेर वा टीज़रहरू प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई तुरुन्तै। तलको रेखा मानिसहरुलाई हाँस्न, सिकाउन वा प्रेरित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
L. हल्का गर्नुहोस्
यो बोरिंग भिडियो बनाउन एक त्रुटि हो। तपाईको विचारलाई लेडमा रूपान्तरण गर्ने जति धेरै, तपाइँले मार्केटिंगमा फोकस गर्नु पर्दैन। तपाईंको दर्शकहरू हाँस्न, ज्ञान प्राप्त गर्न र उनीहरूको बोरिंग वर्क डेबाट भाग्न चाहन्छन्। हास्य चमत्कार हो। बक्सबाट सोच्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो स्थानमा अरूलाई देखेको कुरामा सीमित नहुनुहोस्। रचनात्मक हुनुहोस् र जोखिम लिनुहोस्। धर्मेश शाहका अनुसार (हबस्पटको संस्थापक र सीटीओ) प्रायः भिडियोहरू धितो र रूढिवादी छन्। यदि तपाईं बाहिर उभिन चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं रचनात्मक हुनै पर्छ।
Search. खोज ईन्जिनका लागि अप्टिमाइज गर्नुहोस्
त्यहाँ धेरै रणनीतिहरू छन् कि तपाईं यो सुनिश्चित गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको भिडियोहरू सजिलैसँग गुगल र अन्य खोजी ईन्जिनहरूमा फेला पर्नेछन्। एक सुरुवातको लागि, तपाईंको डोमेनमा भिडियो होस्ट गर्नुहोस्। दोस्रो, तपाइँका भिडियोहरूमा इम्बेडिंग सक्षम गर्नुहोस् किनकि यसले इन-बाउन्ड लिंकहरू पाउने सम्भावना बढाउँदछ र जब तपाईं यसमा हुनुहुन्छ, भिडियो साइट-नक्सा लिन नबिर्सनुहोस्।
जब यो भिडियोको लागि एसईओको लागि आउँदछ, वर्णन सबै कुरा हुन्। ती (वर्णन) खोज ईन्जिन माकुराको लागि तपाइँको भिडियोमा जे आयो प्रयोग गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सबै भिडियोहरू प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरू, शीर्षक, र वर्णनहरू ट्याग गरिएको छ।
Ate. शिक्षित र आफ्नो लायक प्रमाणित
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको दर्शकहरूको दुई तिहाई केहि नयाँ सिक्नको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ? उनीहरूले कसरी तपाईंको सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्दछन् भनेर सिकाउन यो अवसर लिनुहोस्। उदाहरण को लागी, तपाईको ब्रान्ड बेच्नको लागि वेबिनरहरू बनाउनुहोस् जहाँ कुनै निश्चित ठाउँमा छ। यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, भिडियोहरू वास्तवमै एक कन्फर्मेसन हुन् कि तपाईंको उत्पादनहरू / सेवाहरूले आवश्यकता पूरा गर्छन्।